एन्थ्रेसाइट उच्च गुणस्तरीय जीवाश्म कोइला एक प्रकारको छ। यो metamorphism (ठोस खनिज र संरचनात्मक परिवर्तन डिग्री) को उच्च स्तर द्वारा विशेषता छ।
कोइला माटो तहहरू अन्तर्गत अक्सिजन बिना थिए कि बिरुवाबाट वर्ष हजारौं भन्दा गठन - खानी, एन्थ्रेसाइट अन्य प्रकार संग रूपमा। समय को एक महत्वपूर्ण अवधिको लागि यो coalification र humification को प्रक्रिया विषय थियो। यो भने पदार्थ को गठन थियो। कार्बन अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन शब्दहरू देखि आफ्नो नाम मिल्यो - कार्बन। यो एक विश्वसनीय तथ्य छ। एन्थ्रेसाइट कोइला को गुणात्मक दृश्य छ। यो पनि एक carbuncle भनिन्छ।
एन्थ्रेसाइट को विशेषता सुविधाहरू
यस मामला मा धेरै विकल्प छन्। अर्थात्, उपस्थिति:
कालो वा कालो र खैरो संतृप्त;
उच्च तापवर्धक शक्ति;
पर्याप्त विद्युत चालकता;
उच्च कठोरता र घनत्व।
जीवाश्म को गठन को सुविधाहरू
यो खाता धेरै प्रक्रियाहरूमा लाग्छ। एन्थ्रेसाइट एक निश्चित क्रममा गठन गरिएको छ। पहिलो पीट गठन र त्यसपछि खैरो कोइला प्रकार। यसबाहेक, केही अन्तर्गत अर्को पदार्थ मा जीवाश्म प्रभाव पार्ने दिइएको। अर्थात्, यो मा कोइला र एन्थ्रेसाइट। उत्तरार्द्ध मामला मा, ग्रेफाइट गर्न संक्रमण लिंक।
एन्थ्रेसाइट (कोइला) को बारे6किमी को एक गहिराई मा निहित। स्थानहरू जहाँ स्रोतहरू अक्सर आत्म-छवि डाटा हो, पाप्रो को फेरबदल एक प्रकारको विशेषता द्वारा। मूलतः यो spurs।
एन्थ्रेसाइट कोइला बेसिन को सबै भन्दा ठूलो जम्मा डोनेट्स्क क्षेत्रको क्षेत्रमा स्थित।
एन्थ्रेसाइट कोइला: उत्पादन विशेषता
यस मामला मा, धेरै विशिष्ट nuances छन्। एन्थ्रेसाइट (ग्रीक anthrakitis।) - यो धरण जीवाश्म कोइला छ। यो metamorphism को एक उच्च डिग्री छ। एक माइक्रोस्कोप अन्तर्गत हेर्दा बोट शायद रहन्छ कि फरक देखाउँछ। एन्थ्रेसाइट - कोइला, कालो रंग भएको अक्सर grayish tinge संग। कहिलेकाहीं रंग र mottled discolouration भेटिए। यो एक बरतन प्लेट मा एक मखमली कालो लाइन दिन्छ। पनि एन्थ्रेसाइट (कोइला) बलियो धातु चमक द्वारा विशेषता छ। यो एक उच्च चिपचिपाहट, सुखा छैन राम्रो विद्युत चालकता छ। उच्चतम कठोरता Mohs मात्रा - 2.0-2.5, जैविक ठूलो घनत्व - 1500-1700 किलो / एम 3। दहन को गर्मी - 33,9-34,8 MJ / किलो (8100-8350 किलो कैलोरी / किलो)। यो एक विश्लेषणात्मक कम चिस्यान छ - 1-3% र पदार्थ, 93,5-97,0% कार्बन, 3.1% हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजन 1.5-2.0% को एक अस्थिर प्रकार को 9% गर्न goryucheobraznoy वजन समावेश गर्दछ। यो एक निश्चित तथ्य छ। ईंन्धन ठूलो 97 भन्दा% भनिन्छ superantratsitom छ कार्बन जसमा यो जीवाश्म। मात्रा उपज द्वारा अस्थिर पदार्थ को उत्पादन दुई औद्योगिक ब्रान्डहरु विभाजन गरिएको छ। अर्थात्, 220-330 एल / किलो को उपस्थिति संग - एन्थ्रेसाइट - यो र 220 भन्दा कम एल / किलो को volumetric उत्पादन उपस्थिति संग poluantratsity।
भने जीवाश्म को लाभ
यो उत्पादन झिकिएको कोइला को उच्च गुणस्तरीय दृश्य छ। यो रूपमा निम्न मापदण्डहरु छ, अन्य प्रकार देखि एकदम फरक छ:
निश्चित कार्बन को उच्च सामाग्री। यस मामला मा, यो 94-99% छ।
कम सल्फर सामाग्री।
उच्च दहन को विशिष्ट गर्मी।
कम चिस्यान सामाग्री।
धुवाँ र flames बिना बल्न।
चाँडै बाहिर बाल्न।
जैविक ठूलो को उच्च घनत्व। यस मामला मा, प्रति वर्ग मीटर 1500-1700 किलोग्राम।
साझेदारी को एन्थ्रेसाइट कोइला - 1.5-1.7।
उच्च विद्युत चालकता।
साथै जसको फोटो herein प्रदान एन्थ्रेसाइट कोइला, दहन समयमा sintered छैन। को Mohs मात्रा स्तर यसको कठोरता - 2.0-2.5। अर्को महत्वपूर्ण फाइदा भएको एन्थ्रेसाइट को दहन समयमा हावा मा मात्र 5% volatiles गर्न विनियोजन गरिएको छ भन्ने छ।
जीवाश्म तापवर्धक गुणस्तर कुनै पनि अन्य कोइला, प्रति किलोग्राम अर्थात् 8,200 kilocalories उच्च यस प्रकारको। तुलना गरेर, ग्याँस ताप मूल्य मा - 7000 किलो कैलोरी / किलो।
जो प्रकार दिइएको subdivided जीवाश्म
एन्थ्रेसाइट कोइला उच्च उत्पादन को छ। यो पहिले छलफल गरिएको छ। यो र धेरै अन्य विशेषताहरु प्रयोग यसको क्षेत्र निर्धारण मा एक भूमिका खेल्छन्। यस्तो आकार कक्षाहरू klassifitsirutsya जीवाश्म कोइला एन्थ्रेसाइट (GOST 19242-73) अनुसार। अलग उत्पादन को आकार अंश द्वारा बाहिर छ। अर्थात
"Ako" - एन्थ्रेसाइट मुट्ठी नट। यस मामला मा, कब्जा अंश 26-100 मिमी को एक आकार भएको।
"एके" - एक ठूलो एन्थ्रेसाइट कोइला मुट्ठी। यो 50-100 मिमी को अंश आकार पनि समावेश छ।
"AO" - ग्रेड कोइला, एन्थ्रेसाइट ओखर। 26-50 मिमी को आकार अंश।
"Am" राम्रो एन्थ्रेसाइट छ। 13-25 मिमी - यस मामला मा, अंश खातामा लिन।
"रूप" - ग्रेड कोइला, एन्थ्रेसाइट बीउ। यी 6-13 मिमी को एक आकार भइरहेको अंश समावेश गर्नुहोस्।
"Ashlam" - एन्थ्रेसाइट slurry। उहाँले कोइला लुगा धुने एक मूल उत्पादन हो।
"अल" - Duff एन्थ्रेसाइट। यस मामला मा अंश6भन्दा कम मिमी छ।
कार्यान्वयन एन्थ्रेसाइट निकासी भएको सम्बन्धित शाफ्ट मा प्रदर्शन गरिएको छ। तिनीहरू 1500 मा पु एक गहिराई छ। द कोइला त्यसपछि बारुद देखि खुवाउनुभयो छ प्रशोधनका लागि उद्यम गर्न। त्यहाँ संवर्धन र भिन्न द्वारा क्रमबद्ध बाहिर। यस पछि, मा बैग (एन्थ्रेसाइट) कोइला विभिन्न उपभोक्ताहरु आपूर्ति गरिएको छ।
यो सामाग्री को कार्यान्वयन सदस्य (एपी) को रूप मा छ, र धनी मा एकाग्रचित्त। भने अन्तर्गत ट्रेडमार्क "AM" र "Ako" गुण समान छन् जीवाश्म। हुनत को resistivity कोइला सानो प्रकार एक उच्च छ।
एन्थ्रेसाइट को प्रयोग
यो उत्पादन एकदम लोकप्रिय छ। एन्थ्रेसाइट - यो कोइला सबैभन्दा बाक्लो रुप हो। यो उहाँलाई गर्मी स्थानान्तरण र दहन समय कक्षा मा पहिलो स्थिति कब्जा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं ताप लागि एन्थ्रेसाइट (कोइला) खरिद भने, तपाईं यदि तपाईं अर्को प्रजाति वा काठ को एक समान उत्पादन प्रयोग भन्दा एउटै क्षेत्र हीट धेरै कम यो आवश्यक छ। यो जीवाश्म सबै लाभ, आफ्नो वर्तमान र बेफाइदा भए तापनि। एक ठूलो घनत्व संग, यसलाई चम्कने बस्तु गर्न सक्षम छ बयलर र भट्टियों को सबै प्रकार मा छैन। यो जान्न महत्वपूर्ण छ। राम्रो दहन एन्थ्रेसाइट लागि हावा को राम्रो आपूर्ति गर्न आवश्यक छ। मुख्यतया ठोस इन्धन बयलर को आधुनिक प्रकार मा अनिवार्य छ। कोइला प्रजाति को एक कम घनत्व गर्न समावेश: लामो-ज्वाला कोइला र caking।
एन्थ्रेसाइट, यसको तापवर्धक, अन्य analogues उच्च गुणहरू धन्यवाद। यो मापदण्ड 8200 किलो कैलोरी / किलो छ। उदाहरणका लागि, प्राकृतिक प्रकार ग्याँस - 7000 किलो कैलोरी / किलो। एन्थ्रेसाइट - यसको साथीहरूको सबै को मुश्किल छ जो कोइला। दहन मात्र 5% गर्न विनियोजन गरिएको छ समयमा यो volatiles। एन्थ्रेसाइट मानव गतिविधि विभिन्न क्षेत्रहरू मा प्रयोग गरिन्छ। अर्थात्, औद्योगिक प्रकार (रसायन, धातु, चीनी उद्योग, आदि) एक कम्युनल क्षेत्रमा (ताप पानी, ताप र यति मा) को उत्पादन मा। पनि निजी परिवारमा लागि ताप प्रयोग गरिन्छ। यो जीवाश्म बढी नालियों, पानी र यति मा सफाई को लागि प्रयोग गरिन्छ कि filtrants उत्पादन।
बिजुली उद्योग मा एन्थ्रेसाइट
यस क्षेत्रमा भने उत्पादन प्रयोग पनि आवश्यक छ। 0-13 वर्ग को उच्च खरानी सामग्री, व्यापक शक्ति पुस्ता मा इन्धन रूपमा प्रयोग गरिन्छ जो एन्थ्रेसाइट देखि स्क्रीनिंग। यो उद्योग मा, यो जीवाश्म किनभने कम अस्थिर सामग्रीको प्रयोग भएको छ। विद्युत शक्ति एन्थ्रेसाइट विशेष उपकरण को दहन लागि प्रयोग गरिन्छ।
दहन भट्टीमा को पाउंछन् उत्पादन पनि एक विशेष डिजाइन आवश्यक छ। आफ्नो कन्फिगरेसन बरु peculiar छ। उहाँले एक विशेष दहन क्षेत्रमा हुँदा यसलाई एक समय को भने जीवाश्म पूरा दहन उपलब्ध गराउनु पर्छ।
सानो अंश, साथै सल्फर, नाइट्रोजन को एक कम सामग्री र फस्फोरस विशेष केटल्स प्रयोग यस को लागि डिजाइन गर्दै छन् संग कोइला। अर्को प्रयोग एउटा सानो आकार भट्टीमा सिमेन्ट प्रकार मा उत्पादन बताए।
धातु मा एन्थ्रेसाइट
यस क्षेत्रमा, यो जीवाश्म पनि यसको अनुप्रयोग पाइएन। एन्थ्रेसाइट फलाम र चूना धातु sintering मा प्रयोग गरिन्छ। डोमेन electrosteel र ठीक प्रक्रियाहरू माहौल मा निकालेको हानिकारक पदार्थ को संख्या नियन्त्रण गर्न अनुमति छैन। तसर्थ, को प्रयोग पूर्वनिर्धारित उच्च इन्धन थप वातावरण मैत्री धातु प्रक्रियाहरू निम्त्याउँछ भन्नुभयो।
साथै, उच्च-कार्बन स्टील्स को उत्पादन मा प्रयोग यो सानो जीवाश्म प्रकार माध्यमिक carburization गठन गर्ने। मा विस्फोट भट्टियों, एक PCI प्रणाली (को पाउंछन् इन्धन को उड्ने) भइरहेको पनि एन्थ्रेसाइट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ आपूर्ति छ जो कोइला, को चिस्यान को मुख्य सूचक हो।
यस मामला मा, इन्धन को ब्लास्ट फर्नेस डाँठमा मा इंजेक्शन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। चीन, जापान, कोरिया - समान प्रविधि धेरै राम्रो पश्चिमी युरोप एशिया को र मा देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ। रूस र युक्रेनमा, यो विधि लोकप्रियता प्राप्त छ।
को धातु उद्योग कोइला मा पनि धातु एजेन्ट कम रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
एन्थ्रेसाइट - sorbents
यो अझै पनि यो जीवाश्म को प्रयोग सबैभन्दा होनहार रुझान को छ। एन्थ्रेसाइट खानेपानी र ढल शुद्ध लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, त्यो फिल्टरको भूमिका खेल्छ र सजिलै सक्रिय प्रतिस्थापन गर्न सक्छ कोइला। यो एक महत्वपूर्ण कारक हो।
वैकल्पिक उच्च कार्बन सामाग्री
कोइला बजार परंपरागत दुई खण्डहरूमा विभाजित। तिनीहरूलाई तल चाहनुभएको शक्ति र कोक उत्पादन हो। उत्पादनहरु लागि मूल्य रुझान खण्ड र अन्य कारक भर पर्छन्। र अक्सर तिनीहरूले भिन्न छन्।
एन्थ्रेसाइट एक अद्वितीय उत्पादन, दुई खण्डहरूमा सफलतापूर्वक वर्तमान छ। यसबाहेक, उहाँले अझै पनि औद्योगिक प्रयोग को विशेष बजार मा एक महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। विभिन्न खण्डहरूमा त्यस्तै सामान लागि मूल्य गतिशीलता त्यो छ, यस सन्दर्भमा, त्यहाँ एक redistribution छ, फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, कठिन कोइला को एक खण्ड को लागत पतन भने अर्को यो सामान्यतया बढ्छ।
ग्रेफाइट, कोइला, पेट्रोलियम कोक संग प्रतिस्पर्धा सफलतापूर्वक एन्थ्रेसाइट। किनभने यो तिनीहरूलाई लागि मूल्यहरु को आयाम बिजुली ऊर्जा, धातु उत्पादन र यति मा को लागत निर्भर हुनेछ। यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सबै माथि, एन्थ्रेसाइट को मूल्य विश्व अर्थव्यवस्था को के हालत असर गर्नेछ। तर, पछिल्लो दशक भन्दा विकास सजिलै देखिने स्थिर गतिशीलता छ।
माथिको परिणाम अनुसार, यो कोइला एन्थ्रेसाइट खनिज को दुनिया को सबै भन्दा साधारण दृश्य हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ। उत्पादन प्रक्रिया को लागि उच्च तापमान मा बिजुली र गर्मी उत्पन्न हुँदा यसलाई नेट ऊर्जा उत्पादन गुणस्तर को एक उच्च स्तरीय छ। उहाँले रसायन को उत्पादन लागि उद्योग मा लागू गरियो र अपेक्षाकृत सस्तो छ। जब आधुनिक विज्ञान र प्रविधि छैन पूर्ण एन्थ्रेसाइट उद्योग मा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। यो एक महत्वपूर्ण तथ्य छ। तसर्थ, निकट भविष्यमा एन्थ्रेसाइट र bituminous कोइला को गहन निकासी को एक निरंतरता हुनेछ।
धातु लागि विश्वव्यापी मिलिंग मिसिन
चुरोट "एलडी": ब्रान्ड को विवरण र सबै सुर्ती प्रजातिहरू
भागहरु निर्माण को प्राविधिक प्रक्रिया; प्रकार, आवश्यकताहरु, प्रक्रियाहरु विकास
Khrunichev बोट: इतिहास, उत्पादन, ठेगाना
Acetylene को प्रयोग। acetylene वेल्डिंग
प्लास्टिक को लेजर काटन। सबैभन्दा सही प्रविधी काटन Plexiglas, प्लास्टिक, प्लाईवुड
दही बिना घर दही: फोटो संग नुस्खा
Warhammer: कुल युद्ध: सिस्टम आवश्यकताहरु, मुख्य विशेषताहरु को विवरण
गुड - यो के हो, कसरी यो आफैलाई गर्न
इन्डेन्टेसन। "शब्द" मा अनुच्छेद इन्डेन्ट कसरी व्यवस्थित गर्ने
तेल कसरी निकाल्न? तेल कहाँ झिकिएको छ? तेल को मूल्य
रोजा टम टम: प्रजातिहरू, रोपण र छाँट्ने विवरण
Zeno of Elea। एलेनोको एलोनाको एपोरिया। आत्मकैतिक विद्यालय
मिश्र, Hurghada, महोत्सव Le Jardin Resort 5: * समीक्षा, मूल्यांकन, वर्णन, फोटो
दृष्टान्त "सधैं हुनेछैन"
क्सीनन लागि रोशनी लगाइँदै। मोटर वाहन लागि हेडलाइट्स